Ndị nnabata TenGO bụ nhọrọ kacha mma maka Mirroring | Gam akporosis
Na 4st narị afọ, enwere ndị ọrụ ole na ole na-enweghị smartphone nke ha nwere ike ịnụ ụtọ ụdị ọdịnaya niile, gụnyere fim na egwu. Ma ezi ihe ma ihe ọjọọ nke iri ọdịnaya na obere enyo pụtara ìhè: anyị nwere ike ime ya ebe ọ bụla mana, ọkachasị n'ihe banyere vidiyo, anyị ga-ahụ ihe emere na ihuenyo nke oge ụfọdụ gafere XNUMX sentimita asatọ. Ma ọ bụrụ na anyị nwere TV dị nso, ndị Ndị nnata TenGO Wi-Fi ha ga-eme ka anyị hụ ihe niile na nnukwu ihu.
Ekwenyesiri m ike na n'oge a ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ Androidsis ga na-eche banyere Google's Chromecast. N'ihi gịnị? Ọfọn, n'ihi na Chromecast bụkwa Wi-Fi erite nke ga-ekwe anyị enyo na TV ihe anyị na-ahụ ma ọ bụ nụ na ngwaọrụ gam akporo anyị, mana enwere ọdịiche dị mkpa nke na-eme ka atụmatụ TenGO mara mma karịa nke Google.
1 Ndị nnata TenGo anaghị adabere na netwọk Wi-Fi
2 Ofdị ndị nnata TenGo maka gam akporo
2.2 Nkọwapụta GoCast
2.3 Egwu GoCast
Ndị nnata TenGo anaghị adabere na netwọk Wi-Fi
Ndị nnata ndị ọzọ, dịka Chromecast ahụ e kwuru na mbụ, dabere na netwọk Wi-Fi ka ọ rụọ ọrụ, ya bụ, inwe ike ijikọ ngwaọrụ gam akporo anyị na ndị nnabata ndị ọzọ, ma ngwaọrụ gam akporo na nnata nke anyị jikọtara na TV ga-abụ. jikọọ na ya. Wi-Fi na netwọk. Na-enweghị rawụta nke na-ewepụta akara ikuku, ngwaọrụ gam akporo anyị enweghị ike ijikọ na telivishọn anyị. N'aka nke ọzọ, ndị nnabata TenGO mepụta network Wi-Fi nke ha, n'ihi ya, anyị nwere ike igosipụta ihe (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) ama ọ bụla gam akporo ọ bụla na TV ọ bụla nwere ọdụ ụgbọ mmiri HDMI, nke kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị gaa njem gaa ebe anyị na-enweghị accessntanetị, ọnọdụ ebe anyị ga- ikekwe ị ga-akwụsị n'oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na anyị gaa ezumike.
Ofdị ndị nnata TenGo maka gam akporo
El GoCast Dual ga-kacha yie Chromecasts, ma maka ọnụahịa na maka njirimara ya. Ọ na-efu .39.95 5, naanị € XNUMX karịa atụmatụ Google, mana na ọdịiche dị na, dịka anyị kwurula, anyị nwere ike ịga ụlọ nkwari akụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ obodo na-enweghị Ntanetị, jikọọ ya na ọdụ ụgbọ mmiri HDMI nke telivishọn ma malite ikiri ihe niile ihe nkiri anyị chebere na ngwa gam akporo anyị, yana ịge egwu site na igwe okwu TV ọ bụrụhaala na ọ bara uru.
Ihe anyị kwurula na Dual dịkwa na Mirroring, mana nke abụọ ga-enye anyị ohere yiri enyo kọmputa ọ dịghị mkpa iji eriri. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ iji ihuenyo nke abụọ (ihe nkesa na-eme iji rụọ ọrụ ụfọdụ, mana yana eriri), Nkọwapụta GoCast Ọ ga-enye anyị ohere ịgbatị desktọpụ Windows anyị ma jiri igwe onyonyo anyị nwere windo ọzọ nke na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ nke ọma, dịka ọmụmaatụ. N'ezie, maka ọnụahịa nke € 49.95 (ma ọ bụ chetaghachi 40.95 n'oge ederede a).
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ige egwu, anyị nwekwara nke ahụ Egwu GoCast. Onye nata a yiri nke ọma abụọ gara aga, mana ọ nwere 3.5mm jaak njikọ nke mere na anyị nwere ike jikọọ ya na stereo ọ bụla. N'aka nke ọzọ, ọ nwekwara ọnọdụ Router nke na-enye anyị ohere izipu ọdịnaya ọdịyo na ịntanetị. Nke a ga-abụ nhọrọ ahọrọ ọ bụla music n'anya. Ọ dị maka otu ọnụahịa dị ka GoCast Mirroring, maka € 49.95.
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ onye na-anabata ọtụtụ mgbasa ozi na oke nke pendrive, microShare bụ ihe nwere ike ịmasị anyị. Obere Wi-Fi erite ga-ekwe ka anyị tụgharịa uche fọrọ nke nta ọ bụla ọdịnaya na site na ngwaọrụ ọ bụla dakọtara na njikọ DNLA. Mana obere nha biara na onu ahia na microShare, nke yiri GoCast Dual, di onu ahia na 49.95.
Enwere ike iji ngwa ahụ jikwaa ndị nnata niile anọ Centerlọ ọrụ mgbasa ozi TenGO na ị nwere dị na njikọ ndị a.
Ya mere ugbu a na ị maara: ọ bụrụ na ị na-atụle ịzụta ngwaọrụ nke na-enye gị ohere ijikọ gam akporo ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba na TV ma ọ bụ na ị na-aga ezumike gaa ebe na-enweghị ntanetị ma ọ bụ router, ndị na-anabata TenGO Wi-Fi bara uru.
Ozi ndi ozo: Enwerem! Gam akporo-TV
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị nnata TenGO Wi-Fi ma ọ bụ otu esi enyo TV na-enweghị rawụta dị nso
Chromecast mepụtara netwọ Wi-Fi nke ha ma ọ bụrụ na otu adịghị, ha na-akwado njikọ na-enweghị ikike na-enweghị ikike onye ọ bụla ijikọ Wi-Fi n'ụlọ site na ntụtụ
Zaghachi Rafael Soler Muñoz
Enwerem chromecast ma ọ naghị emepụta network WiFi nke ya?
Ya adịla mgbe ị ga-azụta Ten-Go! Ha bụ ngwaọrụ ole na ole na-ada opekata mpe, anyị ga-agbakwunye na ọrụ ndị ahịa dị egwu.
[APK] Ihe elekere Google na-agbakwunye olu na njikwa vibration, mgbanwe anya na ndị ọzọ